Shiinaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Cilmi-baarista Cilmi-baarista ah ee Ultrasonic Spray Atomization Qalabka Soo-saarista iyo Warshad | Qianrong
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Cilmi Baadhista Sayniska ah ee Ultrasonic Spray Atomization Qalabka
Qalabka atomization buufinta Ultrasonic waa mashiin yar oo buufin sax ah oo ku habboon tijaabooyinka cilmi baarista sayniska. Waxay qaadataa tiknoolajiyada xaraashka ultrasonic ee QRsonic ee isku-dheelitirnaanta sare ee sub-micron iyo nano-heer daahan filim khafiif ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa unugyada shidaalka, unugyada cadceedda, iyo dahaadhka dhalooyinka. , Wareegyada elektarooniga ah iyo warshadaha kale.
Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. waa soo saare xirfadle ah oo madaxbanaan cilmi baaris iyo horumarin, wax soo saar iyo iibinta qeybaha ugu muhiimsan ee ultrasonic iyo noocyada qalabka codsiyada oo dhameystiran, iyadoo diiradda la saarayo codsiyada ultrasonic ee aan caadiga ahayn. Codsiyada ugu muhiimsan ee ku lug leh waa: xereynta atomization ultrasonic, ultrasonic indium ultrasonic / tinning / alxanka, goynta ultrasonic, daaweynta xalka heerkulka sare, ultrasonic kala firdhinta / burburin / emulsification / homogenization, ultrasonic caag / alxanka birta, ultrasonic alxanka alxanka / rogista alxanka / tolid aan xuduud lahayn, ganaax ultrasonic, iwm.
Qalabka buufinta Ultrasonic atomization: isticmaal tamarta mowjadaha ultrasonic si aad u kala jabisid biyaha ama dareeraha si aad u sameysid walxo yaryar oo dhowr micron ah oo ka badan 100 mikroon oo cabir ah si aad uhesho qoyaan hawo, qashin dareere ah, isku qasid, dhiirigelinta falcelinta kiimikada, buufinta, iyo birta dhalaalida Nidaamka taageerayaasha iyo ujeedooyin kale.
Isku mid ahaanta sare: Xereynta Ultrasonic waa tiknoolajiyad heer sare ah oo lagu buufiyo tiknoolajiyada, oo loo isticmaalo isku dheelitirnaanta sare ee sub-micron iyo nano-scale miisaanka filimka khafiifka ah.
Keydinta maaddada iyo ilaalinta deegaanka: Maaddaama buufin-xawaare hooseeya oo aan cadaadis sahal ahayn la xakamayn karo, dhibcahana ay ku soo dhacayaan substrate-ka halkii ay ka soo laaban lahaayeen substrate-ka, waxay xaqiijin kartaa hoos u dhac weyn oo ku yimaada xaddiga xad-dhaafka ah, badbaadin qalab badan lana yareeyo qiiqa deegaanka. Heerka isticmaalka daahan ee ku xereen ultrasonic waa in ka badan 4 jeer in lagu buufiyo dhaqameed laba-dheecaan ah.
Xakamaynta sare: Marka loo baahdo qulqulka qulqulka aadka u hooseeya, sanka ayaa ah midka ugu macquulsan. Marka walxaha la buufiyo la hakiyo, waxay leeyihiin faa'iidooyin gaar ah. Iyada oo loo marayo saameynta ultrasonic ee laf-dhabarka laftiisa, jajabku si isku mid ah ayaa loo hayaa inta lagu jiro geedi socodka buufinta oo dhan si loo hubiyo in qaybaha shaqeynaya ay si siman ugu kala firidhsan yihiin lakabka khafiifka ah.
Waxtarka sare iyo keydinta tamarta: dareeraha waxaa loo wareejiyaa madaxa buufinta culeyskiisa ama bamka cadaadiska hooseeya wuxuuna gaaraa atomization joogto ah ama goos goos ah, xannibaad la'aan, xirnaan la'aan, buuq la'aan, cadaadis la'aan, qaybo dhaqaaqin, biyo qaboojin looma baahna inta lagu jiro atomization, iyo isticmaalka tamarta yar, Qalabka waa mid fudud, heerka guuldaradu wuu hooseeyaa, xuubka ultrasonic wuxuu leeyahay shaqo is-nadiifin ah, iyo dayactirka maalin walba waa bilaash.
Si baaxad leh ayaa loo isticmaalay: Qalabka xereenka Ultrasonic waxaa badanaa loo isticmaalaa unugyada shidaalka, unugyada sawir qaadeyaasha filimada qafiifka ah, filimka qoraxda qafiifka ah ee filimka, unugyada qoraxda ee perovskite, unugyada qoraxda, rinjiyeyaasha graphene, unugyada sawir qaade ee silikoon, dahaarka dhalooyinka, wareegyada elektarooniga ah iyo warshadaha kale Miiraha ayaa loo adeegsan karaa xalal kala duwan, bullaacadaha, dareeraha kiimikada, iyo dareeraha saliida leh sidoo kale waa la atomikarin karaa.
Hore: 3000W Alxanka kululeeyaha kululeeyaha kululaynta Caleemaha Dhamaadka Caaga ee Laydhka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Alxanka
Xiga: Teknolojiyada Atomisation ee Birta ah ee Ultrasonic Ultimate for Powder Tin
30Khz 700w Ultrasonic Vibratior for Xiinka ...
Joogtaynta 40Khz gariirka Ultrasonic Rubbe ...
RFID Smart Card 60Khz Xiinka Sare Ultrasonic ...
38mm dhexroor 28Khz Xiinka gariirka Transd ...
40Khz Qalabka Wareejinta Xiinka Neefta ...
20Khz Xiinka Mashiinka Alxanka Machine for Th ...